PineTab: sei zvinhu zviri zvePINE64 piritsi (10/2021) | Linux Vakapindwa muropa
Kana muzhizha re2020 iwo ekutanga mayuniti eiyo pinetab senge iyo edition yeEkutanga Adopter, mumwe aisagona kufungidzira kuti yaive mberi zvakadii kune mamwe ese. Mumaoko evatorwa vekutanga kubva munaGunyana wegore rapfuura, pakave nenhau, asi zvinhu zvinogona kunge zviri nani pane chero sisitimu yekushandisa kana desktop yatinosarudza. Saka pano isu tichaongorora zvishoma kuti zvinhu zviri sei muna Gumiguru 2021 yeiyo PINE64 piritsi.
Kune akatiwandei mapurojekiti ari kushanda pasoftware yePineTab (uye iyo PinePhone). Vanosiyana navo Ubuntu Bata, system inouya nekumisikidza, Arch Linux, Mobian uye Manjaro, kuwedzera kune postmarketOS. Kana isu tikatora zvakanaka zveumwe neumwe zvese zvaizove zvakakwana, asi panongogara pane imwechete Achilles chitsitsinho. Chii chakanaka uye chii chinofanira kuvandudzwa? Isu tinoiongorora.
1 Kusvika nhasi uye kune iyo PineTab, Ubuntu Touch ndiyo inoshungurudza zvikuru
4 Arch Linux uye Manjaro pane PineTab
5 Iyo PineTab yakakwana, mumaonero emupepeti
Kusvika nhasi uye kune iyo PineTab, Ubuntu Touch ndiyo inoshungurudza zvikuru
Ini ndinofunga kuti nezvataurwa pamusoro, zvinenge zvese zvinotaurwa. Iyo PineTab inouya neUbuntu Kubata yakaiswa nekusarudzika, uye inogona kunge iri sarudzo yakanakisa kana ikavandudza webhurawuza uye iwo desktop desktop (Libertine) yakashanda. Kune vamwe, kusanganisira ini, lomiriYaimbozivikanwa se Unity8, inopa yakanakisa Linux ruzivo pahwendefa. Ndokureva kuti, pani kana doko, iyo yekuvhura application kana iyo multitasking maonero inoita kuti tinzwe kuti isu takatarisana nepiritsi chairo, uye kwete pamberi pekuti ini ndoda iyo ini handigone (mupfungwa iyi) saPhosh.
Uye zvakare, ine zvakare ine desktop desktop iyo inoitwa otomatiki nekuisa kiibhodhi kwariri. Asi zvese zvinogara mumvura ye borage kana tichifamba nechikepe neMorph kana isu tinoisa desktop desktop kuti tirege kuvhura. Zvese zvimwe zvakanaka, asi zvakada kufanana nekuve neFerrari yakamiswa mugaraji. Saka ini ndine Ubuntu Kubata: yakaiswa mune yemukati ndangariro uye kumirira iyo base kuti ivandudzirwe kuUbuntu 20.04 kuti uone kana paine nhau maererano neLibertine.
Ini handinzwe kunyanya zvakanaka kuzvipira kuuchapupu, asi ndinofanira. Phosh akashata pahwendefa, kunyange Manjaro anozvigadzirisa zvishoma nekuwedzera saizi yemifananidzo uye keyboard. Zvinonyatso kuoneka kuti iri interface yakanangana nemafoni, uye pahwendefa haina kukodzera zvakanaka. Asi kuna Kesari zviri zvaKesari ndizvo zvinonyanya kushanda, kunyangwe zvichishandiswa muManjaro, Arch Linux kana Mobian. Haasi akawanda mabhugi ane ruzivo, zvinotibvumidza kuwana izvo zviri pamutemo marekodhi uye isu tinokwanisa kuisa desktop desktop, saka, tichisiya parutivi dhizaini, iyo inopa iyo yakanakisa mushandisi ruzivo pane yeLinux piritsi.
Ini ndinonyatsoda iyo KDE software. Ini ndaishandisa uye ndaishandisa pamalaptop maviri uye paRaspberry Pi, asi software yedesktop haina kufanana neiya yakagadzirirwa dhizaini yekubata. Ivo vari kutora matanho kumberi, asi kune akawanda madudu anofanirwa kuvandudzwa. Semuenzaniso, pane dzimwe nguva apo PineTab ichapunzika, uye zvinoshandiswa zvakapetwa kaviri (kana katatu, kana zvimwe…) mudhirowa rekushandisa. Plasma Mobile ikozvino yakaita yedesktop vhezheni ingangoita makore 5-6 apfuura: zvese zvinotaridzika zvakanaka, asi zvinofanirwa kukura.
Arch Linux uye Manjaro pane PineTab
Arch Linux yagara ichiita zvakati wandei kana zvishoma paPineTab. Pakutanga akasarudza Phosh, iyo inowedzera kukura interface, asi isu tatova ne Plasma vhezheni. Iri mune ino umo ini ndakaedza iyo KDE software zvakanyanya, uye kwandakaona iwo madiki madudu anofanirwa kugadziriswa hongu kana hongu. Pa desktop, shanduko dzatinoita hadziwanzo kuchengetwa, saka kana iwe ukawedzera widget, ungangotadza kuibvisa gare gare. Tarisai maapplication Iyo yakashinga, asi zviri nyore kufungidzira ramangwana mune zvese zvakapwanywa.
Iwo matambudziko haabvi kuArch Linux, kana isiri Plasma. Izvo zvinoitikawo mune postmarketOS. Tinogona kuisa AUR software, asi iwe unofanirwa kuziva maitiro ekugadzirisa shanduko nekuti mamwe mapurogiramu anogona kusashanda.
Kubva paArch Linux ndiManjaro, sarudzo yangu pane desktop uye paPineTab… painoshanda. Mwedzi yapfuura vakaburitsa vhezheni nePlasma, asi yaigara yakatwasuka. Zvese zvinhu zvaienda mushe, asi piritsi rinotaridzika zvirinani mumamiriro ekunze. Pari zvino, Manjaro iri kuburitsa mifananidzo yePineTab (pano) naPhosh naPlasma, asi ini hapana chandaigona kuyedza nekuti hadzitange. Ndinofanira kureurura kuti ndiri kutarisira kugadzirisa iyi tsikidzi, sezvo Manjaro yanga ichimhanya zvakanyatsonaka pandakayedza… pasati pavandudzwa kutyora kuiswa kwangu.
Iyo PineTab yakakwana, mumaonero emupepeti
Kwandiri, iyo PineTab yakakwana haipo uye zvinonetsa kuti ivepo. Manzwi haana simba, kana uchiteerera, nekuti, semuenzaniso, muArch Linux unofanirwa kuisa alsa-utils uye nekuchinja kadhi rezwi ku "pinetab". Zvakare, iyo Hardware ishoma kwazvo. Asi, nezviri kunze uko, iyo PineTab yakakwana ichave iri:
lomiri: iyo yakanakisa interface pamwe nemasaini epiritsi. Kana ivo vachikwenya Plasma, inenge iri sarudzo, asi kwete se "piritsi" seLomiri.
Manjaro: Ndinoyeuka ndichigovana vhidhiyo muboka nezve iyo PineTab iyo yakaona mavhidhiyo eYouTube akatamba, uye yakazviita zvakakwana. Kana ndikarangarira nemazvo, yaive neruzha mushure mekuiswa zero, saka hapana chikonzero chekubatanidza kiibhodhi kwariri kuti riite.
Arch Linux kugadzikana, kunyanya mukugadzirisa. Arch Linux yakagadzikana paPineTab, uye ini handisati ndamboona dambudziko mushure mekuvandudza.
Arch / Manjaro zvinyorwa: muArch repositories pane yakawanda yakagadziridzwa software, uyezve iwe unogona kuwedzera rutsigiro rweAUR uye uwane zvese. Chimwe chinhu ndechekuti inochinjirwa yekubata masikirini kana ARM zvivakwa, asi ichi chinhu chatisingafanirwe kupa takagara munzvimbo dzeDebian repositori futi.
Sarudzo 2: Ubuntu Bata neLibertine inomhanya. Chimwe chezvinhu izvo UBports iri nazvo ndezvekuti isu hatigone kuputsa sisitimu. Nechikonzero ichocho ivo havatibvumidze isu kuwana mahofisi epamutemo nekutadza, uye nekuda kwechikonzero ichocho iwe unogona kuisa desktop desktop mumidziyo ine Libertine. Inopawo sarudzo yekuita "fekitori" kumisikidza kubva kune anoshanda masystem.
Izvi ndizvo zvakaita zvinhu nhasi, uye zvakare zvakare tinofanira kuva nemoyo murefu. Mugore rapfuura, Plasma yatanga kushanda muchiSpanish, Manjaro yatanga kuburitsa mifananidzo vhiki nevhiki uye Ubuntu Kubata… zvakanaka, ikozvino unogona kuzviona zvichitenderera. Zvichida gore rinotevera Plasma yakapurindwa uye inogona kushandiswa nemavhidhiyo akanaka uye odhiyo paManjaro, kumwe kugovera kunoburitsa mifananidzo neLomiri kana Ubuntu Touch ndizvo zvazvinofanira kunge zviri uye zviri kune mamwe majaira. Pane zvingasarudzwa. Iwe unongofanirwa kugadzirisa zvinhu, uye ndinofunga vachadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » PineTab muna Gumiguru 2021: Arch Linux ine Plasma, vhiki nevhiki Manjaro mifananidzo uye Focal Fossa yakamirira Ubuntu Kubata